ဖြေရှင်းချက် - ရှန်ကျန်းပူးတွဲနည်းပညာ Co. , Ltd မှ
ပို. ပို. လုပ်ငန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ရေတပ်စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မော်တော်ယာဉ် dispatchingwith ရေယာဉ်စုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စီစဉ်, ရာမသာထိထိရောက်ရောက်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အဖိုးတန်၏လုံခြုံရေးအာမခံ, ဒါပေမယ့်လည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ်များလျော့နည်းစေသည်။
လူများ, ယာဉ်များနှင့်ကုန်တင်: ကျနော်တို့သုံးပိုင်းသို့ရေယာဉ်စုစီမံခန့်ခွဲမှုဝေဖန်လော့။ ဒီမှာ "လူတွေက" ယာဉ်မောင်းများနှင့် passengers.We ထိထိရောက်ရောက် RFID နည်းပညာ, ကင်မရာနှင့် GPS စနစ် terminal ကို၏ထိရောက်သောပေါင်းစပ်နှင့်အတူကားမောင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယာဉ်မောင်းများ၏မောင်းနှင်အချိန်ကြီးကြပ်နိုင်ပါတယ်ပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့ထိထိရောက်ရောက်အဆိုပါသတိပေးချက်များနှင့်အရေးပေါ်နှိုးစက်အားဖြင့်ယာဉ်မောင်းများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံပေးနိုင်သည်။
ရေယာဉ်စုစီမံခန့်ခွဲမှု: ကျနော်တို့ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ပတ်သက်. အမျိုးမျိုးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုခြေရာခံများနှင့်မော်တော်ယာဉ်များ '' location.The ယာဉ်များတိကျမှုစုံစမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ clients များထိထိရောက်ရောက်ရှင်းလင်းစွာယာဉ်များပစ္စုပ္ပန်လှုပ်ရှားမှုများကို သိ. ပြီးနောက်စေလွှတ်နိုင်ပါတယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းယာဉ်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်အတန်းကိုသိနိုငျသညျ။ ကျနော်တို့ကြိုတင်ယာဉ်များများအတွက်လမ်းကြောင်း-စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းစေအဖြစ်အသေးစိတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး: ထိရောက်စွာပေးပို့စီမံခန့်ခွဲမှုအောင်မြင်ရန်သကဲ့သို့,, etc ကင်မရာနည်းပညာ, တံခါးကိုသံလိုက်သော induction နည်းပညာ, ဘား-code ကို scanning နည်းပညာ, RFIDtechnology, GPS, နည်းပညာ, ကြိုးမဲ့ထုတ်လွှင့်နည်းပညာ, မှတဆင့်လမ်းအပေါ်မိုဘိုင်းပစ္စည်းများ၏ပြေးအခြေအနေများစောင့်ကြည့်ရာ ထိထိရောက်ရောက်အဖိုးတန်ပိုင်ဆိုင်မှု, ခိုးယူလုယက်ခြင်းနှင့်ပျောက်ဆုံးသွားကြသည်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။
1.The စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းဒေသဆိုင်ရာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း 4.Vehicles operating / 10 languages2.Real အချိန်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သမိုင်းခြေရာခံ review3.Route စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကို support 5.Real အချိန်နှိုးစက်များနှင့်နှိုးစက်အစီရင်ခံစာများကတင်ပြထားပါတယ်။